Huawei yatotanga nekutsiva Android neHarmony OS mumidziyo yayo | Linux Vakapindwa muropa
Huawei yatotanga nekutsiva Android neHarmony OS mumidziyo yayo
Huawei yazivisa chinangwa chayo chekutenderera dzakatenderedza zana mamodheru zvakasiyana nema smartphones pakutanga akashongedzerwa neiyo Android chikuva, kune yako Harmony OS. Iwo mamodheru ekutanga kutama ndiwo maratidziro ayo, senge Mate 40, Mate 30, P40 uye Mate X2 iyo ichagamuchira yekutanga yekuvandudzwa mune mazuva mashoma. Zvezvimwe zvese zvishandiso, izvo zvekuvandudzwa zvichaitwa mumatanho.
Zvinokosha kuti akati kutama hakuzokanganisa vashandisiSezvazviri, iyo Harmony OS vhezheni yemafoni efoni haisi yakasarudzika sisitimu yekushandisa, asi ingori imwe nadzurudzo yeApple, inowirirana neApple maererano nesystem zvinhu, mashandiro uye masevhisi masevhisi.
Mune emulator yakarongedzerwa kuyedzwa, iyo interface yakanyatsoenderana ne Android 10, asi kutonga ne prototype inoratidzwa mumharidzo, chikuva chakatovandudzwa ku Android 11, sezvo ichisanganisira maficha ebazi iri.
Musiyano ne Android unonyanya kuderedzwa kune shanduko yechiratidzo, pamusoro peizvozvo pachinzvimbo chekushandisa Android chitoro chekushandisa (Playstore), chinoita kushandisa kwayo yega application katarogu (AppGallery), inoenderanawo neSuper Device tekinoroji kuronga kutaurirana nevamwe vashandisi zvishandiso nekutsiva iyo interface kugadzirisa iyo mudziyo uye nekupa inowedzeredzwa EMUI goko, iyo yaimbove yakaiswa pamidziyo yeHuawei pane Android.
Kunyangwe paitika kuitika kwemazita, Harmony OS yemafoni emafoni haienderane neHarmony OS edition yemidziyo yeIoT, iyo iri kuvandudzwa muOpenHarmony repository uye yakavakirwa pane yayo yega OS OS microkernel.
Panguva imwecheteyo, kunyangwe paine kusangana kwakazara kwese kwese kwese kwese interface uye masevhisi muzviratidziro zviripo zvekuyedzwa (kusanganisira kuchengetwa kwezita reApple mumazita enzira yacho), vamiriri veHuawei mubvunzurudzo neTechCrunch ivo vanoenderera kupokana kuti Harmony OS ndeye yakazvimiririra inoshanda sisitimu iyo isina yakajairika Android mitsara yekodhi.
Mune ino kesi, vamiririri veHuawei havataure kuti ndeipi vhezheni yeHarmony OS yavari kutaura nezvayo uye vanoshandisa chokwadi chekuti iro rimwe zita reHarmony OS chikuva rinoshandiswa kumafoni efoni nemaIoT zvishandiso, uye Harmony OS yemidziyo yeIoT haina kana chekuita ine Android.
Sezvineiwo, Mutungamiri weHuawei wezvigadzirwa zve software akasimbiswa mubvunzurudzo neGerman edition ComputerBase , que Harmony OS inoshandisa kodhi yeAOSP (Android Open Source Project) yemafoni emafoni uye kuti chikuva chitsva chinoitwa chakafanana sezvinobvira kuApple kuti isashandure chimiro chinozivikanwa chevashandisi. Huawei inonzi inosangana nezvose zvinodiwa uye marezinesi ari pasi peiyo Android kodhi.
Mukuwedzera Huawei akataura mwedzi wapfuura kuti inotarisira zvinopfuura mamirioni mazana matatu emidziyo (muchiChinese) mhanya Harmony OS pakupera kwegore. Iyo kambani yakati iri kutaura ne200 vanogadzira mameseji epasirese kugadzira mapuratifomu epuratifomu.
Chekupedzisira, zvinotaurwa zvakare kuti Iko kutama kwakarongerwa kupedzwa mukota yekutanga yegore rinouya. Panguva imwecheteyo, iyo yekutanga piritsi, smartphone uye smartwatch inosumwa uye inozotumira pakarepo neHarmony OS.
Iyo smartwatch nyowani inotarisirwa kuve neLite OS-based Harmony OS musiyano (yapfuura Huawei smartwatches chikepe neLite OS). Avo. Kana Huawei akambopa mahwendefa uye mafoni eApple uye mawadhi akangwara eLite OS, ikozvino ichavapa mumhando dzakasiyana dzehurongwa hweHarmony OS, izvo zviri izvo zvakafanana Android uye Lite OS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Huawei yatotanga nekutsiva Android neHarmony OS mumidziyo yayo
Clonezilla Live 2.7.2 yakatoburitswa uye idzi ndidzo nhau dzayo